Stripe inobatana nerondedzero yetekinoroji mapuratifomu ayo afunga kumisa mabasa avo kuna Donald Trump | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva mashoma apfuura takagovana pano pane blog iyo nhau nezve sarudzo yakaitwa nemamwe masocial network mushure mezviitiko zvechisimba kuCapitol uye iyo Stripe inobatana nayo saka haichazogadzirisazve kubhadharisa kwaMutungamiri Trump uyo akaramba achiunganidza mari. Uye ndiyo fintech kambani inobata makadhi kubhadhara kwemamiriyoni emakambani epamhepo uye e-commerce mapuratifomu, kusanganisira webhusaiti yeDonald Trump webhusaiti.
Nedanho iri Stripe yakacheka sosi yakakosha yemubhadharo wezvematongerwo enyika uye afunga kurambidza account yemutungamiri wenyika yekutyora mutemo wayo pamusoro pekusimudzira mhirizhonga. Izvi zvinoreva kuti webhusaiti yemushandirapamwe yemutungamiri wenyika haichakwanise kuwana mari yekubhadhara processor, izvo zvinodzivirira mushandirapamwe waTrump kubva pakugamuchira zvipo
mutsetse inoda kuti vashandisi vabvumire kusatambira kubhadharwa kwezviito "zvine njodzi", kunyangwe kune chero kambani kana sangano iro "rinosanganisira, rinokurudzira, rinokurudzira kana kupemberera mhirizhonga zvisiri pamutemo kana kukuvara kwevanhu kana zvinhu", maererano nemutemo wayo wekushandisa.
Iyo kambani yakambodzora maakaundi nekuda kwezviito zvechisimba. Mushure mekunge murwi wepfuti auraya vanhu gumi nemumwe mukurwiswa musinagogi rePittsburgh muna 11, Stripe akavhara Gab.com (kurudyi-bapiro renhau rezvenhau iro raifungidzirwa kuti mupfuri akatumira mameseji anopesana nemaSemite).
Mushandirapamwe waTrump wakagamuchira anodarika $ 1.8 miriyoni muStripe musarudzo yemuna 2020, sekureva kweFederal Election Commission zvinyorwa.
Mushandirapamwe waTrump nekuita zvematongerwo enyika mwedzi wapfuura zvakaratidza kukwidza mari inodarika madhora mazana maviri nemakumi manomwe nemanomwe pakati peZuva reSarudzo nekutanga kwaZvita.
Naizvozvo, mushandirapamwe waTrump wakaparura mushandirapamwe wekutsvaga mari yekugadzirisa huwandu hwematare akaunzwa nemutungamiriri wenyika kumatunhu enyika. Anenge ese makwikwi ematare akabviswa, asi kuyedza kwakakwidza mazana emamirioni emadhora kuRepublican Party.
Nekudaro, chikamu chinowedzera chemari chakaenda kukomiti yezvematongerwo enyika yezvematongerwo enyika zvakagadzirwa naTrump kubatsira kubhadhara zviitiko zvake zvepaWhite House.
Kufamba kwaStripe kunotevera kufamba kwakafanana kubva kune mamwe makambani uyo akacheka zvisungo naTrump kana veparamende veparamende vakapinda mukupokana nekudzokororwa kwemhedzisiro yesarudzo.
Citigroup (C), Marriott (MAR), Commerce Bank neBlueCross BlueShield ndemamwe emakambani makuru akazivisa kuti achamisa zvipo zvavo zvePAC kuvamiriri vezvematongerwo enyika vakaedza kudzosera zvakabuda musarudzo.
Iyo tekinoroji makambani anobata ruzhinji rwekutengeserana kwemari online vafunga kuvhara mutungamiriri wenyika.
Shopify uye PayPal ndivo vakatanga kutora matanho vachipesana nevanopfurikidza mwero pakati pevatsigiri vaMutungamiri Trump vakapinda mumhirizhonga.
PayPal akaita kuti nhoroondo dzemamwe mapoka evatsigiri vaTrump dzimiswe uyo akashandisa mari yekuchinjisa fintech kuronga mari kubhadhara zviito zvevapanduki paCapitol Hill.
Iyo kambani yanga ichishingairira kupwanya pasi-kurudyi varatidziri kwenguva yakati. Mushure mekuratidzira kwaCharlottesville uye mhirizhonga yakatevera mu2017, kambani yakarambidza masangano akati wandei kurudyi. Kwechinguva,
NeChina chakapfuura, Shopify yakazivisa kuti ichabvisa mawindo emusangano weTrump. uye chiratidzo chaTrump chaicho.
Uku ndiko kushandurwa kwemutemo kubva kukambani, iyo makore apfuura yakati yaisazogadzirisa chikuva chayo, asi mumakore achangopfuura yakacheka zvimwe zvitoro zvine nharo, senge zvimwe zvitoro zvine mapapiro kurudyi muna 2018.
Finalmente kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kutarisa chinyorwa chekutanga Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Stripe inobatana nerondedzero yetekinoroji mapuratifomu ayo afunga kumisa mabasa avo kuna Donald Trump